Ebe mba dị iche iche si (1-32)
Ụmụ Jefet (2-5)
Ụmụ Ham (6-20)
Nimrọd mara Jehova aka (8-12)
Ụmụ Shem (21-31)
10 Ihe a bụ akụkọ ndụ ụmụ Noa, bụ́ Shem,+ Ham, na Jefet. A mụụrụ ha ụmụ mgbe Iju Mmiri ahụ gachara.+ 2 Ụmụ Jefet bụ Goma,+ Megọg,+ Medaị, Jevan, Tubal,+ Mishek,+ na Taịras.+ 3 Ụmụ Goma bụ Ashkenaz,+ Raịfat, na Togama.+ 4 Ụmụ Jevan bụ Elaịsha,+ Tashish,+ Kitim,+ na Dodenim. 5 Ọ bụ ndị a mụtara ndị bi n’agwaetiti dị iche iche, ndị nke ọ bụla n’asụsụ ha dị iche iche, n’ezinụlọ ha dị iche iche, nakwa ná mba ha dị iche iche. 6 Ụmụ Ham bụ Kush, Mizrem,+ Pọt,+ na Kenan.+ 7 Ụmụ Kush bụ Siba,+ Havila, Sabta, Reama,+ na Sabteka. Ụmụ Reama bụ Shiba na Didan. 8 Kush mụrụ Nimrọd. Nimrọd bụ onye mbụ bụ dike n’ụwa. 9 Ọ bụ dinta* dị ike nke na-ama Jehova aka. Ọ bụ ya mere e ji asị mmadụ: “Ị dị ka Nimrọd bụ́ dinta* dị ike nke na-ama Jehova aka.” 10 Obodo ndị mbụ ọ chịrị bụ Babel,+ Irek,+ Akad, na Kalne. Ha dị n’ala Shaịna.+ 11 Nimrọd si n’ala ahụ banye n’Asiria+ ma rụọ Ninive,+ Rehobọt-Iye, Kela, 12 na Risen, nke dị n’agbata Ninive na Kela: Obodo a bụ nnukwu obodo.* 13 Mizrem mụrụ Ludim,+ Anamim, Lehebim, Naftuhim,+ 14 Patrusim,+ Kasluhim (onye ndị Filistia+ si n’agbụrụ ya), na Kaftorim.+ 15 Kenan mụrụ Saịdọn+ na Het.+ Saịdọn bụ ọkpara ya. 16 Ọ mụkwara ndị Jebus,+ ndị Amọraịt,+ ndị Gegash, 17 ndị Haịvaịt,+ ndị Akaịt, ndị Saịnaịt, 18 ndị Avad,+ ndị Zemaraịt, na ndị Hemat.+ Mgbe e mechara, ezinụlọ ndị Kenan gara biri n’ebe dị iche iche. 19 N’ihi ya, ókè ala ndị Kenan malitere na Saịdọn ruo Gira,+ n’ebe dị nso na Gaza,+ ruokwa Sọdọm, Gọmọra,+ Adma, na Zeboyim.+ Obodo ndị a dị nso na Lesha. 20 Ọ bụ ha bụ ụmụ Ham n’ezinụlọ n’ezinụlọ, n’asụsụ ha dị iche iche, n’ala ha dị iche iche, nakwa ná mba ha dị iche iche. 21 A mụkwaara Shem ụmụ. Shem bụ nwanne Jefet. Ọ bụ Jefet tọrọ ụmụnne ya ndị ọzọ.* Iba+ na ụmụ ya niile sikwa n’agbụrụ Shem. 22 Ụmụ Shem bụ Ịlam,+ Ashọ,+ Apakshad,+ Lọd, na Eram.+ 23 Ụmụ Eram bụ Ọz, Họl, Gita, na Mash. 24 Apakshad mụrụ Shila,+ Shila amụọ Iba. 25 A mụụrụ Iba ụmụ nwoke abụọ. Aha otu bụ Pileg,*+ n’ihi na ọ bụ n’oge ọ nọ ndụ ka ndị mmadụ gara biri n’ebe dị iche iche n’ụwa.* Aha nwanne ya nwoke bụ Jọktan.+ 26 Jọktan mụrụ Almodad, Shilef, Hezamevet, Jira,+ 27 Hedoram, Yuzal, Dikla, 28 Obal, Abimel, Shiba, 29 Ofa,+ Havila, na Jobab. Ha niile bụ ụmụ Jọktan. 30 Ebe ha bi malitere na Misha ruo Sifa, bụ́ ebe bụ́ ugwu ugwu n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ. 31 Ọ bụ ha bụ ụmụ Shem n’ezinụlọ n’ezinụlọ, n’asụsụ ha dị iche iche, n’ala ha dị iche iche, nakwa ná mba ha dị iche iche.+ 32 Ọ bụ ndị a bụ ndị ezinụlọ ụmụ Noa n’ọnụmara n’ọnụmara nakwa ná mba ha dị iche iche. Ọ bụ n’ezinụlọ ndị a ka mba dị iche iche si gbasaa n’ụwa mgbe Iju Mmiri ahụ gachara.+
^ Ma ọ bụ “onye agha.”
^ O nwere ike ịbụ, “Obodo niile a bụ otu nnukwu obodo.”
^ O nwere ike ịbụ, “Ọ bụ Shem tọrọ Jefet.”
^ Pileg pụtara “Nkewa.”
^ Na Hibru, “ka e kewara ụwa.”